]Umhlinzeki we-Fire Assay Crucibles umphakeli, ubumba befektri ebelekile, i-graphite yobumba ebekiwe - i-ptlerceramic
Liling Xing Tai Long Special bobumba Co., Ltd. yasungulwa ngo-1997, onguchwepheshe ucwaningo nentuthuko, yokukhiqiza umlilo Assay Ngobhojwana NgamaFascist futhi cupel.
Imikhiqizo asetshenziselwa ukuhlaziywa eziyigugu metal, izimayini ukuhlolwa laboratory, amaminerali assaying negolide assaying. Fire Assay crucibles okokusebenza fireclay exutshwe nezinye izinto refractory, bangakwazi ukumelana lokushisa kuze kufinyelele 1300 ℃. Bona has ukumelana kakhulu ekuhlaselweni ecucuza, ukuguguleka komhlabathi, ngokuhlaziya futhi ukushaqeka ezishisayo.
Ngenxa umkhiqizi enamandla zochwepheshe umlilo Assay Ngobhojwana NgamaFascist nge cupel, sinalo isakhiwo ifektri 7000 square metres entsha nge-othomathikhi line production.
Le nkampani njalo abanamathela izinga basinde, imibono emisha kanye nentuthuko, ubuqotho sha, ukuvikela kanye Cabangisisa emva-sales service amabhizinisi njengoba umgomo. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yethu zithengiswa khona kahle ezweni lonke, bese zithunyelwa eJalimane, United States, i-Brazil, e-Russia, eMexico ... emazweni angaphezu kuka-20, izinga lomkhiqizo kanye inkonzo kakhulu ukunconywa amakhasimende.
"Ikhwalithi, intengo engcono kakhulu '' kuyinto kubaphathi bethu wumgomo. silindele ngobuqotho ukuba ubambisane uquqaba amakhasimende ezifuywayo angaphandle, ukuthuthukiswa ezivamile! Siyakwamukela ukuvakashela futhi aphenye lenkampani yethu.
]Omusha oneminyaka engu-Alibaba's-eziyishumi eliphezulu-umphakeli
]IS0 9001: 2005
]Sine ephelele umugqa ukukhiqizwa futhi imishini ukuhlola, kuhlanganise othomathikhi line ukukhiqizwa
]Sine ithimba lethu siqu ucwaningo, umklamo, umkhiqizo kanye ethengisa
]Sesidlule IS0 9001: 2005. standard, ezinzile, okuthembekile
]-Kuhlela ne Development
]I-close ubudlelwane namakhasimende kwenza ithimba lethu ukuletha isevisi Bespoke okungukuthi yesibili none.
]Singabantu inkampani kuhlangene-R & D, ukukhiqiza kanye yokuthengisa ngokuphelele
]Nge eliphezulu, inkonzo firt-class, nebhizinisi elisemthethweni
Imikhiqizo yethu Uthole umusa esusela markets.They basekhaya nabamazwe angaphandle manje kabanzi timbiwa emazweni angu-200.
]Into yokuqala esiyenzayo ukuhlangana ukuxoxisana namakhasimende ethu kanye nenkulumo ngokusebenzisa imigomo yabo emsebenzini wokwakha esizayo.
Phakathi nalo mhlangano, zizwe ukhululekile ukuxhumana imibono yakho bese ubuza imibuzo eminingi.